ထားဝယ်ရှိရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများ | iMyanmarHouse.com
ထားဝယ် | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10137736 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မြောက်ဒဂုံ ၃၀ရပ်ကွက် မန္တလေးလမ်းကျောကပ် လုံးချင်းအိမ် ရောင်းရန်ရှိပါတယ်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9932507 အတွက် Min Mahar Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တနင်္သာရီတိုင်း၊ လောင်းလုံမြို့နယ် - အောက်ကျောက်ဝပ်ကျေးရွာ၊ ထောင့်နန်းကမ်းခြေတွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9814594 အတွက် TPL Myanmar Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9814574 အတွက် TPL Myanmar Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မြောက်ဒဂုံ မြို့နယ် 28 (Pilot)ရပ်ကွက် 2RC ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေလုံးချင်းအိမ်အ​ရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9814351 အတွက် Gay Har Min Real Estate & Law Firm Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09260991419 09266458812 09420699669
Gay Har Min Real Estate & Law Firm Services Co.,Ltd. ပိတ်ရန်
Beach land for sale Dawei
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9762475 အတွက် Gay Har Min Real Estate & Law Firm Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9762452 အတွက် Gay Har Min Real Estate & Law Firm Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ထား၀ယ္ျမိဳ့မွ အိမ္နွင့္ေျမ ေရာင္းမည္
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9337098 အတွက် Gay Har Min Real Estate & Law Firm Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သင့်အနာဂါတ် (မြောက်ဒဂုံ Capital ကပ်လျက်)စိန်ပန်းမြိုင်လမ်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9150807 အတွက် သင့္အနာဂါတ္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်